Fakafakao ny fitsipiky ny teknolojia kanto misy ny sofina mahay, ohatrinona no fantatrao
Ny haitao marani-tsaina, raha lavitra dia lavitra antsika, dia tsy hita afa-tsy amin'ny blockbusters fiction fiction, ankehitriny afaka mahatsapa teknolojia manan-tsaina isika, mila earphone kely marani-tsaina kely fotsiny, azonao atao ny mahatsapa ny nofinofisin'ny rivotra mandeha ho azy, mandeha ho azy ny jiro, maty fotsiny toy ny hoe ca ...
Inona avy ireo tombontsoa enina voalohany amin'ny fanaovana headset Bluetooth
1. Fihaonana mpanampy Teleconferencing dia fahita amin'ny asa sy ny fiainana ankehitriny. Raha tsy maintsy mitazona ny telefaona mandritra ny adiny iray amin'ny toerana lavitra ianao, dia harary be ny tendanao sy ny tananao. Mino aho fa ireo mpianatra niaina izany karazana fanaintainana sy fijaliana izany dia te-hahazo lohany Bluetooth ...
Fikojakojana sofina isan'andro
Ny headphones dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiainana andavan'andro, ny mandeha eny an-dalambe dia mahita olona maro be mivezivezy, manao headphone hankafizany mozika. Ny lohateny fanaraha-maso dia tena zava-dehibe amin'ny fandraketana sy ny lalao matihanina noho ny feon'olombelona miavaka. Fa raha ny fitehirizana sy ny fampiasana diso kosa dia hanimba ...
Ny fonon-tsika dia orinasa mampifandray indostria sy mivarotra am-peona am-bozona
Andao atomboka amin'ny fampidirana headphones. Ny fonon-tsika dia orinasa mampifandray indostria sy mivarotra am-peona am-bozona. Mino aho fa fantatry ny rehetra fa ny fomba fampitaovana am-paosy eny an-tsena dia misy headset tariby tws sy headset tsy misy tariby, saingy mino aho fa mety tsy ho fantatrao ny ...
Toetra mampiavaka ny ks-017
1. Ny toetra mampiavaka ny ks-017 dia hanohana ny famolavolana ny maha-izy azy, ny fahatsorana ary ny lamaody amin'ny loha-doha. Green dia mitovy hevitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana azy ireo, ary ny 017 antsika dia mamaritra tsara ny toetran'izy ireo ...